जापानमा वसन्त पोशाक! तपाईंले के लगाउनु पर्छ? - Best of Japan
यदि तपाईं वसन्त (मार्च, अप्रिल, मे) को समयमा जापान भ्रमण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, यात्रा गर्दा तपाईंले कुन लुगा लगाउनु पर्छ? वास्तवमा, जापानी मानिस प्राय: वसन्त inतुमा के लगाउने भन्ने बारे चिन्ता गर्छन्। जे भए पनि तापक्रम बिस्तारै यस समयमा तातो हुनेछ, तर अझै पनि चिसो लाग्न सक्छ। जापानी मानिसहरु दिन बिहान मौसम पूर्वानुमान सुन्छन् र चिसो भइरहेको छ भने अक्सर कोटको साथ बाहिर जान्छ। यदि तपाईं वसन्त Japanतुमा जापान आउनुभयो भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं दुबै तातो र चिसो मौसमको कपडा तयार गर्नुहोस्। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई जापानी वसन्त मा यात्रा को लागी लुगा को बारे मा उपयोगी जानकारी प्रदान गर्दछ। मैले तल वसन्तको लुगाको फोटो पनि तयार गरें।
तपाईंले पातलो बाहिरी ज्याकेट पनि तयार गर्नुपर्दछ र यो चिसो हुँदा लगाउनु पर्छ।
वसन्त wearतुमा लगाउने लुगाका उदाहरणहरू
यदि तपाइँ मौसम र मौसम वर्णन गर्न मार्च र मेमा "स्प्रिंग" शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पनि, तपाइँले लगाउने लुगा फरक फरक हुन्छन्।
मार्चमा, त्यहाँ जाडो जस्तै चिसो दिनहरू छन्, त्यसैले यात्राको समयमा तपाईंले पातलो कोट (वसन्त कोट) वा जम्पर ल्याउनु पर्छ। विशेष गरी रातमा यो चिसो हुन सक्छ, त्यसैले सावधान रहनुहोस्।
अप्रिलमा, यदि तपाईं रातमा चेरी ब्लास्म्स हेर्दा खान वा पिउनुहुन्छ भने तपाईं बाहिर जानु अघि पातलो कोट वा जम्पर राख्नु पर्छ। कोटको सट्टामा तपाईले आफ्नो घाँटीमा स्कार्फ लगाउन सक्नुहुन्छ इत्यादि।
मेमा, त्यहाँ धेरै न्यानो दिनहरू हुनेछन्, त्यसैले तपाईं पहिल्यै छोटो स्लीभ शर्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि त्यहाँ मे र जून पनि चिसो दिनहरू छन्। विशेष गरी वर्षाको दिनमा कम्तीमा पातलो ज्याकेट ल्याउन नबिर्सनुहोस्।
यदि तपाईं अपेक्षाकृत कम तापक्रमको क्षेत्र जस्तै होक्काइडो वा होन्शुको उच्च भूमिमा यात्रा गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ भने, जम्परहरू र त्यस्तै कपडाका सामानहरू अपरिहार्य हुन्छन्। मार्चमा त्यस्तो क्षेत्रमा जाँदा, कृपया जाडोको लुगा लगाउँनुहोस्। अप्रिल र मेमा पनि पातलो ज्याकेट नबिर्सनुहोस्।
तल फोटोग्राफहरू छन् जुन म आशा गर्दछु वसन्त मा तपाइँले जापानी लुगा को एक विचार दिनुहुन्छ।
कृपया जापानको यात्राको लागि प्याक गर्ने योजना गर्नु अघि यी फोटोहरू सन्दर्भ गर्नुहोस्। कृपया न्यानो कपडा जस्तै लाइट ज्याकेट ल्याउन नबिर्सनुहोस्!
अर्को लेखमा मैले जापानमा प्रमुख कपडा पसलहरूको वर्णन गरें।
जापानमा वसन्तको लागि उत्तम महिना हो। सबै ठाउँमा सुन्दर नयाँ हरियाली चम्किरहेको छ। मानिसहरूले वसन्त फेसनको आनन्द लिइरहेका छन्। हिउँले ढाकेको पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि पर्यटन मौसम सुरु भयो। "गोल्डेन सप्ताह", वा मेको शुरुको बिदा पछि सबै पर्यटन स्थलहरूमा जापानी पर्यटकहरूको संख्या ...
हिउँदमा हिउँको दृश्य देख्नु चाखलाग्दो छ, तर वसन्त inतुमा टाढा हिउँका पहाडहरू हेर्न यो खराब छैन। एक पछि अर्को खिलिएको फूल र दूरीमा हिउँ पर्वतहरू बीचको भिन्नता अद्भुत छ। थप रूपमा, वसन्तमा, तपाईं सक्षम हुनुहुनेछ ...